Ciidanka AMISOM oo laga mamnuucay Xerada Xalane
Monday April 16, 2018 - 12:55:42 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Farriin dhinaca Amniga ah oo uu soosaaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa Ciidamada AMISOM iyo dadka Soomaalida ahba looga xaddiday in ay galaan xerada xalane.
Xog ay helnay ayaa muujineysa in Maamulka AMISOM ee Xerada Xalane ay farriin dhinaca amniga ah oo lagu xaddidayo dhaq dhaqaaqa dadka ku jira gudaha Xalane loo diray.
Dhinaca kale Ciidanka AMISOM ee aan ku jirin xerada ayaa iyaguna lagu wargeliyay in aysan Maanta gudaha u geli karin xeradaas,iyada oo laga baqayo weerar dhinaca AL-shabaab ah.
Dhinaca Al-baabka Madina Gate ee Degmada Wadajir ayaa sidoo kale la sheegayaa in shaqaalaha Soomaalida ee ka shaqeeya Xalane saaka ay ku adkaatay in ay galaan iyada oo halkaasna la xiray.
AMISOM ilaa hadda si rasmi ah ugama hadlin arrintan,waxaana soo baxaya warar sheegaya in la tuhmayo in qaraxyo lala damacsan yahay Xereda Xalane.
Xarunta Qaramada Midoobey ee ku dhextaalla Xalane ayaa lagu wareejiyay Darbi weyn iyada oo laga gooyay dhisamaha Xalane intiisa kale,waxaa halkaas ku sugan Shaqaalaha Gargaarka,diblomaasiyiinta Caalamka iyo Fadhiga howlgalka ee Nabad ilaalinta AMISOM.
Al-shabaab ayaa horay weerarro ay ugu qaadeen saldhigyada AMISOM ee Soomaaliya ku qabsaday Gaadiidka AMISOM,waxaana looga baqayaa in ay u adeegsadaan weerarrada la tuhmayo ee Xalane,waxaana ay taas sababtay in Gaadiidka AMISOM ee aan ku jirin Xerada maanta laga mamnuuco in ay gudaha u gaalan Xarunta ugu weyn Howlgalka Midowga Afrika ee Muqdisho.
Filo wixii soo kordha.